'जातीय र क्षेत्रीय मुद्धाले रक्तपातपुर्ण अवस्थामा पुर्‍याउँछ' | Interview | Image Khabar
होमपेज / Interview / 'जातीय र क्षेत्रीय मुद्धाले रक्तपातपुर्ण अवस्थामा पुर्‍याउँछ'
'जातीय र क्षेत्रीय मुद्धाले रक्तपातपुर्ण अवस्थामा पुर्‍याउँछ' | Published: July 29, 2015 | बुद्धबार 13 साउन, 2072 | 10:00 AM | Viewed: 1829 times
गोविन्द भट्टराई नेविसंघका पूर्व सभापति तथा कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य हुन् । तनहुँमा जन्मिएर विगत दुई दशक यता सक्रिय राजनीतिमा रहेका उनी पार्टीभित्र इमान्दार र निष्ठावान् नेताका रुपमा परिचित छन् । बौद्धिक तथा शालीन नेताको परिचय बनाएका उनी यतिबेला आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रिय सदस्यका रुपमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, महाधिवेशन तयारी र समसामयिक राजनीतिक विषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानी :
कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा संगठिनभित्र यति धेरै विवाद र गुटबन्दी किन देखिएको हो ?
विवाद सबै ठाउँमा छैन, केही जिल्लामा मात्र छ । यो विवाद भनेको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा हो । यसको टुङ्गो वैधानिक पाटोबाट निस्किन्छ र महाधिवेशन सम्ममा अन्त्य भइसक्छ । कांग्रेसभित्र गुटउपगुट भनेको पुरानै इतिहास हो तर वैचारिक रुपमा कुनै सक्षम छैनन् र दिर्घकालिन रुपमा टिक्न सकेको पनि छैन । यस्ता गुटको भविष्य लामो रहँदैन । समय र पार्टीमा आएको परिवर्तनसँगै यसको अन्त्य भएर जान्छ ।
पार्टी नेतृत्व असफल भयो, झनै कमजोर बन्दै गयो जसका कारण कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहाना पुरा गर्न सकेन भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
नेतृत्वको सफलता र असफलता हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हुनसक्छ । तर मुलुकको नेतृत्वमा कांग्रेस कमजोर भएको छैन । सरकार कम्युनिष्ट अतिवादको घेराबन्दीमा परेको चाहीं पक्कै हो । संविधान बनाउने सवालमा कांग्रेस एक्लैले सक्ने होइन, जसमा सम्झौता हुनैपर्छ । त्यसका लागि कांग्रेसले केही ठाउँमा सम्झौता गरेर देशलाई कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ संविधान दिन सक्छ ।
आसन्न महाधिवेशनबाट पार्टीले कस्तो नेतृत्व पाउँछ ?
मुलुकमा भएको ठूला निर्णयहरु कांग्रेसकै नेतृत्वमा भइरहेका छन् । यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मूल्यांकन भइरहेकै छ । सवाल रह्यो– अबको नेतृत्व, अबको नेतृत्वले ६०/४० को भागबण्डाको अन्त्य गर्नेछ । यतिबेला भइरहेका राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेर सहज रुपमा समाधान गरिरहेको छ । अबको नेतृत्व पार्टीलाई सृदृढ गर्ने खालको होस् । देशको निकाश कांग्रेसले नै दिनसक्छ ।
महाधिवेशनमा तपाईको दावी केमा हो ?
केन्द्रिय सदस्यका रुपमा मेरो स्पष्ट उम्मेदवारी हो । अबको कांग्रेसले राष्ट्रियता, समाजवादको पुनर्व्याख्या गरेर मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्नेछ । त्यसका लागि मेरो निरन्तर प्रयास रहने छ ।
अबको महाधिवेशनमा सभापतिका प्रतिस्पर्धीका रुपमा कति खेमा तयार होलान् ?
यसअघि तीन खेमा मैदानमा थिए । अब चाहीँ वर्तमान सभापतिको टिम र शेरबहादुर देउवा बीचमै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसमा दुईमत नै छैन ।
मुलुकभर जातिय एजेण्डाहरु उठिरहेका छन् । यसलाई कांग्रेसले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
हुनत म जातीयताको पक्षपाती होइन । विश्वमा जातीय र क्षेत्रीय मुद्धाले कहीँ पनि सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । यसले क्षणिक लोकप्रियता मात्र दिन्छ र अन्ततः रक्तपातपुर्ण अवस्थामा पुर्‍याउँछ । तर यतिभन्दा जातीय मुद्धा नसमेटने भन्ने होइन । राष्ट्रिय रुपमा यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । कांग्रेसले राष्ट्रियस्तरमा यसको प्रष्ट रुपमा सम्वोधन गर्नेछ । कम्युनिष्ट अतिवादले उठाएका विचारहरुले आजको युगमा बिक्न सक्दैन । यस्ता विचारले क्षणिक लोकप्रियता दिने गर्छन् तर दिर्घकालिन रुपमा दिन सक्दैन । साम्यवाद बिसौं सताब्दीमा जन्म भयो र अन्त्य पनि २०औं शताब्दीमै भइसक्यो । त्यसैले समाजवादले यस्ता जातीय र क्षेत्रीय मुद्धाको अन्त्य गर्नेछ ।
देश संघीयतामा गइसक्यो, वास्तवमा देश संघीयता जानु जायज थियो ?
संघीयतामा जानु ठिक थियो कि थिएन भन्दा पनि सामथ्र्यको विषय चाहीँ प्रमुख हो । यसको अभ्यास हुँदै गएपछि जनता आफैंले यसको आवश्यकता महसुस गर्नेछन् । तर कम प्रदेश बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो । मैले त तीनवटा मात्र प्रदेश (कोशी, गण्डकी, कर्णाली) हुनुपर्छ, धेरै प्रदेश राष्ट्रको अर्थव्यवस्थाले धान्न सक्दैन भनेको थिएँ । तर तराइका केही दलहरु र कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यसमा धेरै आशक्ति देखियो । यो सजिलो व्यवस्था होइन त्यसैले एकता, सुझबुझ र बैचारिक क्षमता भएकाहरुले मात्र यसको नेतृत्व गर्न सक्दछन् ।
बजेट केहीसमय अघि प्रस्तुत भयो । तर बजेट प्रभावकारी र जनमुखी भएन भनेर सत्तारुढ एमालेले नै विरोध गर्नुपर्ने अवस्था किन आएको ?
यो सबै राजनीति हो । एमालेलाई चाँडै प्रधानमन्त्री पद चाहिएको छ । सरकार परिवर्तन चाँडै गराउने वहाँहरुको इच्छा हो । अन्य दलका नेता अर्थमन्त्री हुँदाका समयमा हामीले पनि बजेट प्रष्ट देखेकै हो । हामीसँग स्रोत साधन नै कम छ । आन्तरिक बजेट नभएकैले क्रान्तिकारी बजेट आउन नसकेको हो । अन्य अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यस्तो धेरै परिवर्तन के पाइएको थियो र ?
मुलुकमा यतिबेला धर्मका विषयमा चर्को बहस भइरहेको छ । यसका बारेमा तपाईको धारणा के छ ?
धर्मलाई राजनीतिमा तान्नु मुर्खता हो । धार्मिक सदभाव, संस्कृति र सहिष्णुतालाई खलल पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ । सबै धर्मलाई सम्मान गरिनुपर्छ । संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गर्नेछ, जहाँ सबै धर्मको उचित सम्मान हुनेछ । तर जे भए पनि धार्मिक स्वतन्त्रता गरिदिए राम्रो हो । किनकी कांग्रेसको चार तारामध्ये एकतारा धार्मिक स्वतन्त्रता नै थियो । त्यसैले धर्मलाई आफ्नै ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ ।
कांग्रेसमा पदाधिकारी थप्ने वा विधान संशोधन गर्ने चर्चा छ । आन्तरिक रुपमा के तयारी भइरहेको छ ?
केही नेताहरुको पदाधिकारी थप्ने इच्छा होला तर बैठकमा बैचारिक रुपमा बहस भएको छैन । धेरै ठूलो समिति बनाइनु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत भनाई हो । ठूलो समिति बनाउँदा संगठन त्यस्तो केही परिवर्तन होला जस्तो लाग्दैन ।
पार्टीको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा होला ?
बीचमा प्राविधिक कठिनाई नआए तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुन्छ । साउनभरीमा संविधान जारी गरेर दुई हप्तामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरि महाधिवेशनमा लाग्न सके सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ ।
पार्टीले वीपी, सुवर्णशमसेर, गणेशमानले लिनुभएको बाटो बिर्सीएको आरोप स्वीकार्नुहुन्छ ?
बिर्सीएको भन्दा पनि हामी यतिबेला फरक अवस्थामा छौं । मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ, राजसंस्थाको अन्त्य भइसकेको छ । लोकतन्त्रको नयाँ मोडलमा गइसकेकाले संस्थापक नेताहरुको विचारहरुमा संशोधन हुँदै गइरहेका छन् ।
पार्टीले भातृ संगठनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको मुल कारण के हो ?
यसमा पार्टीले भन्दा पनि भातृ संस्था नै बढी जिम्मेवार छ । विधान अनुसार पनि धेरै जिम्मेवारी संगठनहरुलाई छ । यसमा नेतृत्वको भूमिका प्राथमिकतामा हुन्छ, पार्टीले त सपोर्टमात्र गर्ने हो । हुन त संगठनमा द्वन्द्व भएन भने चलायमान हुन सक्दैन । यसमा सबै जिम्मेवारी संगठनका सभापतिलाई दिइसकेको छ । सभापतिले बैधानिक ढंगले काम गर्न नसक्नु मुल समस्या हो ।